Inkosazana uMargriet waseNetherlands ogama linguThixokazi weRotterdam entsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukubambisa » Inkosazana uMargriet waseNetherlands ogama linguThixokazi weRotterdam entsha
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukubambisa • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • Iindaba zeLuxury • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IHolland America Line ithi Her Royal Highness Princess Margriet waseNetherlands uMama waseRotterdam.
Amalungu ongezelelweyo osapho lwasebukhosini lwesiDatshi abangoothixo boomama baquka u-Queen Máxima, owathiya igama likaKoningsdam ngo-2016 no-Nieuw Amsterdam ngo-2010. Emva koko u-Queen Beatrix wakhonza njengonina ka-Eurodam ngo-2008. I-Rotterdam V yasungulwa ngo-1958 ngu-Queen Juliana. Emva koko u-Princess Beatrix ogama lingu-Statendam IV ngo-1957 kunye no-Prinses Margriet ngo-1960. INieuw Amsterdam II yasungulwa ngu-Queen Wilhelmina ngo-1937.
IRotterdam iphawula inqanawa ye-13 kuloliwe ohamba ngenqanawa oza kubizwa ngokuba yiRoyal Royal.
Unxibelelwano lwaseHolland America Line kwiNdlu yeorenji lubuyela umva phantse kwinkulungwane ukuya kwiNkosana uHendrik esungula iStatendam III ngo-1929.
Amalungu osapho lwasebukhosini lwaseDatshi asungule iinqanawa ezili-11 ezingaphezulu kweHolland America Line kuyo yonke le minyaka.
IHolland America Line ibhengeze namhlanje ukuba xa iRotterdam ibizwa ngegama lentwasahlobo ezayo, iRoyal Royalness Princess Margriet yaseNetherlands iya kuba ngunina wenqanawa, iqhubeke nesiko eliqale ngeminyaka yoo-1920.
IHotterdam yaseHolland yaseMelika
IHolland America LineUnxibelelwano neNdlu yeOrange lubuyela umva phantse kwinkulungwane ukuya kwiNkosana uHendrik esungula iStatendam III ngo-1929. Ukusukela ngoko, amalungu osapho lwasebukhosini lwaseDatshi asungule iinqanawa ezili-11 ezingaphezulu kweHolland America Line kuyo yonke le minyaka, kubandakanya neRoyal Highness Princess Margriet ogama lingu Prinsendam (1972), Nieuw Amsterdam III (1983), Rotterdam VI (1997) kunye no-Oosterdam (2003).
“Sinombulelo ongazenzisiyo kuba uKumkanikazi ophakamileyo uPrincess Margriet uza kuphinda asebenze njengonina ku I-Holland America Line inqanawa, siqhuba isithethe eside nosapho lwasebukhosini oluqhubeka nokuhlonipha iingcambu zethu zaseDatshi, utshilo uGus Antorcha, umongameli weHolland America Line. “IRotterdam izakuthiywa eRotterdam kunyaka ozayo, kubhiyozelwa isixeko sayo kunye neembali zethu kunye neNetherlands. Sijonge ukukhumbula umsitho apho konke kwaqala khona I-Holland America Line. "
Ukuhamba ngenqanawa eyintombazana yaseRotterdam kwasuka ngo-Okthobha 20, 2021, isuka eAmsterdam, eNetherlands, kwaye iqala uhambo lweentsuku ezili-14 lokudlula olwandle ukuya eFort Lauderdale, eFlorida. Ngexesha lokuvulwa kweCaribbean ukusuka ngo-Novemba ukuya ku-Epreli, iRotterdam iya kuhamba ngeendlela ezintlanu ukuya kwezili-11 zokuhamba ezikumazantsi, entshona, empuma nakwimimandla yetropiki, konke ukujikeleza okusuka eFort Lauderdale. Embindini wenyanga ka-Epreli, inqanawe yenza uhambo lweentsuku ezili-14 olwandle iAtlantic ukubuyela eYurophu ukuchitha ihlobo eNorway, iBaltic, iBritish Isles kunye neIceland, konke kuhamba ngomjikelo ovela eAmsterdam.
IRotterdam yahanjiswa yi Indawo yokugcina iinqanawa iFincantieri e-Itali Julayi 30, 2021. Umhla wokuthiywa kwenqanawa eRotterdam uyakubhengezwa kwiinyanga ezizayo.